လူတခြို့က သိပျကိုတရားကဖြို့ကောငျးတယျ .. – Shinyoon
လူတခြို့က သိပျကိုတရားကဖြို့ကောငျးတယျ ..
December 23, 2020 by Shin Yoon
လူတခြို့က သိပျကိုတရားကဖြို့ကောငျးတယျ .. သူတို့ကပဲ နာကငျြအောငျလုပျပွီး သူတိုို့ကိုပဲ ကိုယျက နာကငျြစသေလိုမြိုး တဈလောကလုံးကို အျောပွောကွတယျလေ … သူကွောငျ့ ကိုယျနာကငျြခဲ့ရတုနျးက ကိုယျဒဏျရာကိုယျကုရငျးပဲ တောငျးပနျပါတယျဆိုတဲ့ စကားလေးတဈခှနျးနဲ့ကနြေပျခဲ့ရတာ ….
ကိုယျကွောငျ့ မတျောတဆ ထိခိုကျမိသှားတော့ အဲ့ဒီအနာကို တဈလောကလုံးကို လိုကျပွတယျသိပျကို တရားကဖြို့ကောငျးတယျ . တောငျးပနျပါတယျဆိုတဲ့စကားတှနေဲ့ ကအြေေးမပေးနိုငျခဲ့သလို ပွောလို့လဲ မဆုံးနိုငျတော့ဘူး
ကိုယျအခါတဈရာမကကူညီခဲ့တုနျးက ကြေးဇူးဆိုတဲ့စကား ပွောဖို့မတေ့တျကွသလောကျ ကိုယျမကူညီနိုငျတဲ့တဈခေါကျရှိလာတဲ့အခါ ရနျသူကွီးတဈယောကျလို ပွုမူဆကျဆံတတျကွတယျ … ဟုတျပါတယျ ဒါ ကိုယျ့ဘေးနားက လူတှေ လုပျကွတာခညျြးပါပဲ .. ဘယျဒဏျရာမှ သူစိမျးပေးခဲ့တာ မပါဘူး
ကိုယျကောငျးခဲ့တုနျးက ပါးစပျပိတျနတေတျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြဆိုတာကလဲ ကိုယျ တဈခါမှားသှားတဲ့အခါ အခမဲ့ လိုကျပွီး ဖွနျ့ကွတယျ … အမှနျကို ပွငျပေးလိုကျမယျဆိုတဲ့အသိတှေ မရှိခဲ့ကွသလို အမှနျပွငျဖို့ကွိုးစားနတောတှေ မသိကွဘူး သူတို့သိတာ အဲ့ဒီအမှားကို ဘယျလိုထိုးနှကျကွမလဲဆိုတဲ့ အတေးတှပေဲ ရှိကွတာ …
လူတှကေ သိပျကို တရားကဖြို့ကောငျးတယျ … ဖွရှေငျးဖို့မကွိုးစားတော့ဘူး ကိုယျအောငျနပေါတယျဆိုတာ ဘယျသူမှ သိနဖေို့မလိုအပျတော့ဘူး ကိုယျလမျးလြှောကျတဲ့အခါ ကိုယျ့ကြောကိုယျလုံနရေငျဖွဈပွီ ကိုယျခေါငျးခလြိုကျတဲ့အခါ ကိုယျ့လိပျပွာကိုယျလုံနရေငျ ရပွီ ။
လူတချို့က သိပ်ကိုတရားကျဖို့ကောင်းတယ် .. သူတို့ကပဲ နာကျင်အောင်လုပ်ပြီး သူတိုို့ကိုပဲ ကိုယ်က နာကျင်စေသလိုမျိုး တစ်လောကလုံးကို အော်ပြောကြတယ်လေ … သူကြောင့် ကိုယ်နာကျင်ခဲ့ရတုန်းက ကိုယ်ဒဏ်ရာကိုယ်ကုရင်းပဲ တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတာ ….
ကိုယ်ကြောင့် မတော်တဆ ထိခိုက်မိသွားတော့ အဲ့ဒီအနာကို တစ်လောကလုံးကို လိုက်ပြတယ်သိပ်ကို တရားကျဖို့ကောင်းတယ် . တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ ကျေအေးမပေးနိုင်ခဲ့သလို ပြောလို့လဲ မဆုံးနိုင်တော့ဘူး
ကိုယ်အခါတစ်ရာမကကူညီခဲ့တုန်းက ကျေးဇူးဆိုတဲ့စကား ပြောဖို့မေ့တတ်ကြသလောက် ကိုယ်မကူညီနိုင်တဲ့တစ်ခေါက်ရှိလာတဲ့အခါ ရန်သူကြီးတစ်ယောက်လို ပြုမူဆက်ဆံတတ်ကြတယ် … ဟုတ်ပါတယ် ဒါ ကိုယ့်ဘေးနားက လူတွေ လုပ်ကြတာချည်းပါပဲ .. ဘယ်ဒဏ်ရာမှ သူစိမ်းပေးခဲ့တာ မပါဘူး
ကိုယ်ကောင်းခဲ့တုန်းက ပါးစပ်ပိတ်နေတတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကလဲ ကိုယ် တစ်ခါမှားသွားတဲ့အခါ အခမဲ့ လိုက်ပြီး ဖြန့်ကြတယ် … အမှန်ကို ပြင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသိတွေ မရှိခဲ့ကြသလို အမှန်ပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ မသိကြဘူး သူတို့သိတာ အဲ့ဒီအမှားကို ဘယ်လိုထိုးနှက်ကြမလဲဆိုတဲ့ အတေးတွေပဲ ရှိကြတာ …
လူတွေက သိပ်ကို တရားကျဖို့ကောင်းတယ် … ဖြေရှင်းဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး ကိုယ်အောင်နေပါတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိနေဖို့မလိုအပ်တော့ဘူး ကိုယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကျောကိုယ်လုံနေရင်ဖြစ်ပြီ ကိုယ်ခေါင်းချလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံနေရင် ရပြီ ။
သူ့ကို ခဈြခဲ့မိတဲ့အတှကျ နောငျတရလားလို့မေးရငျ